> Resource > iPhone > Sida loo Undelete kaabta iPhone Files
Waa dhici kartaa, marka aad heshay iPhone cusub oo 5 ama iPhone 4s, aad go'aansatay in aad bixiso iPhone jir 4 aad hooyada ama kuwa kale. Marka aad hooyada u yimaadeen, waxaa ka, waxa aad dib ugu khali in Lugood oo synced sida telefoonka cusub, si aad hooyaday ka heli karto telefoonka gebi "cusub". Markaas musiibada soo booqday. Hore iPhone 4 gurmad la tirtiray ay u hagaagsan ee la soo dhaafay. Gurmad hadda way madhnayd, oo aad wax walba oo laga badiyay.
You are here. Markaas waxaan u maleynayaa in laga yaabo inaad kor ku xusan uu aqrinayo musiibada, oo aad rabto inaad undeleted gurmad iPhone faylka. Ma ka quusanina naxariista. Weli waxaad leedahay fursad in aad undelete gurmad iPhone, haddii aad ka heli kartaa wax adigoo raacaya taallaabooyinka hoos ku qoran.
Sida loo undelete iPhone gurmad files
Dhab ahaantii, ku Lugood gurmad ugu danbeeyay ee aan la baxey karo, xogta ayaa la overwritten, laakiin waxaad isku dayi kartaa in la helo hore aad gurmad files. Dhab ahaantii Lugood dhigaysa hayaan gaar ah dhibic kasta marka aad soo celiyay aad iPhone. Waxaad ka heli kartaa haddii ay jiraan iyo in kale. Haddii ay jirto mid, waxaad dib u heli kartaa qayb ka mid ah macluumaadka hore ugu yaraan.
Si undelete gurmad iPhone, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) . Software ayaa kaa caawin kara si aad u baadhid oo dhan Lugood aad files gurmad, oo ha idin ​​ku eegaan oo dhan oo iyaga ka hor soo kabashada.
Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Si aad u raadiso iyo undelete aad hayaan iPhone jir ah, run ahaantii aad kala soo bixi kartaa version mid ka mid ah barnaamij kor ku xusan, wax aad isticmaalayso iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS. Dhammaan iyaga oo isla shaqeeyaan.
Tallaabada 1. Raadi hore iPhone gurmad files
Halkan waxaan ku qaadan version Windows sida tusaale.
Burcad barnaamijka on your computer ka dib markii ay ku rakibidda. Markaas guji soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala hoose. Markaas oo dhan hayaan iPhone noqon doonaan si toos ah la baadhay, oo soo bandhigay sida dabagal. Haddii aad ka heli kartaa raad raac hore aad iPhone, hambalyo! Waxaa Dooro iyo riix Start Scan si ay u soo saaro horyaalka.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo gurmad iPhone undelete
Skaanka aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi. Ka dib markii in, aad ku eegaan karo ku jira oo dhan waa in, sida sawirada, video, fariimaha, xiriirada, qoraalo, iwm Calaameeyey oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer. Hadda waxaad si guul ah kusoo undeleted gurmad iPhone aad file.